DUULA GURGUDDAA OROMOOTA FI LAAFINA KEENYA HARRAA
Duulli gurguddaan, bara 1522 irraa jalqabee waggootii saddeettama (80) guutuu Oromootaa fi diinota isaanii jidduutti geggeeffame. Duulli gurguddaan kunniin hundi haala sirna Gadaatiin gurmaa'ina "Lubaa" jedhamuun kan hogganamee dha. Luubni tokko akka sadarkaa aangoo qabachuu gaheen, bifa haarawaan diinarratti lola adeemsisa. Duulonni kunis Gadaa 10 qoodamu.....
1. Duula Gadaa melbaa[1522-.1530],
2 Duula Gadaa Muudanaa [153-1538],
3 Duula Gadaa kiloolee [1539-1546]
4 Duula Gadaa biifoolee [1547-1554],
5 Duula Gadaa michillee [1555-1562]
6. Duula Gadaa Harmuufaa/Hambisaa/ [1563-1570]
7 Duula Gadaa Roobalee [1571-1578]
8 Duula Gadaa Birmajjii [1579-1586]
9 Duula Gadaa mullataa [1587-1594]
10 Duula Gadaa Duuloo [1595-1602] ture.
Har'aaf Duula Gadaa Michillee kan bara 1555-1562 geggeeffame, haala sochii qabsoo farra diddaa gabrummaa kan yeroo ammaa waliin wal qabsiifnee ilaaluun gaariidha.Gadaa michillee keessa namni diina hin ajjeesfne niitii akka hin fuune,rifeensa ykn dabbasaa mataa akka hin muranne ykn hin gaggabaabfanne seerri tumamee ture.haaluma kanaan waraanni Oromoo lola Tulluu Hazaloo biratti adeemsifame diina waan cabseef,lafa isaanii kan hanga Hararii fi finfinnee jiru salphaatti bilisa baasuu danda'aniiru. Haala qabsoo yeroo ammaan yoo wal qabsiifnee ilaalle, dararaa,dhiittaa,gad aantummaan Ummata oromoo irra Tplf'n ga'aa jiru hiraara sirnoota gita garboomfattoota darban irra dachaa lamaan dabalee jira.sirna tplf ammaa keessatti, lammiin Oromoo 100% mirga abbaa biyyummmaa isaa dhabee akka lammii 2ffaatti ilaalamaa jira, 2 tarkaanfii lubbuu, qaama fi qabeenyaa ummata Oromoo irratti fuulaa-fuulattis ta'e bifa dhoksaan guyyaa dhaa guyyaatti irratti fudhatamaa jira. 3 barataa Oromoos ta'e beekaa Oromoo irratti tarkaanfii fi seera jabaan egeree isaa abdii kutachiisu irratti tumamee biyya abbaa isaa gad lakkisee biyya hambaatti koolu akka galuuf dirqisiifamaa jira. Kanaaf furmaanni ittiin sirna garboofataa abbaa irree motummaa waayaanee jalaa ummati Oromoo ittiin......,
YAA ILMAAN OROMOO: Oromummaan dhiigaafi dhalootaani moo hojiidhaani? Baay'een saba Oromoo, beekaafi wallaalaan har'a gaaffii ati Oromoodhaa jedhuuf deebiin eeyy ee; kan jedhu ta'a. Garuu kan nam a raaju baay'een saba keenyaa dirqama Oromummaa mataa isaa gariin hinbeekan.gariin immoo yoo beekees dirqama oromummaa isaa bahaaykn hojii irra oolchaa kan hin jirreedha kanbeekamu. NAMNI SEENAA HINBEEKNE LAFA OFII HINFALMAATU,NAMNI HIDDA ISAA HINBEEKNEE,SANYII ISAA HINIMAATU akkuma jedhe wellisaa Daagim Makonin. har'a sabni oromoo kan hinbaratin osoo hintaa ne kanbarateyyuu hedduun nama oromummaa dhiisaatii ofii isaayyu kan hinbeekne nama meeqatu jira. Nama meeqa argaa oolla. taajjabd oonni keenyas bakka jirtanitti nam a Meeqa argitu. Dhugaa dirree jirtu Yoo ilaalle utuu sabnii oromoo Impaayi ra Ethiopia jedhamtu kees sa mili. 5O tti tilmaamamu osoo jiruu har'a oromoon lafi isaa Uuma a waaqaatin isaaf kenname saama maa jira. Dargaggoon oromoo kolle jjotaafi yuuniversitota irraa barnoota olaanaa baratani carraa hojii dhabanii egereen isaanii itti duukkanoofte nama meeqatu jira. sabni haalakkaa'u.har'a oromoon saboota xixiqqoo ollaa isa jiraniin illee irratti duulsifamee nagaan ak ka lafa isaarra jiraachuu hindande enye godhamee ajjeefamaa jira. seenaa guyyoota muraasaafi kan bara dheeraati. Utuu ofii isaan hiree isaa murteeffachuu danda'u u,lafa isaa irratti murteeffachuu danda'uu,qaabeenyaa lafa keessa fi dachee irraa utuu dantaa dhuun faa oromoofi Oromiyaa irra oolshac huu danda'uu, nama isa sirna dimo kiraasii jabanaan isa bulchu osoo profeeseroota,Saayintistoota, Doktoroota,injineerootaafi namoo ta beekamoo qabuun ofii isaan biyya Isaa dureettii OROMIYAA bul shachuu danda'uu mili 50 taanee hireefi carraa kana hundaa dhabnee Alagaan dhiiga oromootti waan tokko hinqabne, afaaninin, Amantiin,Aadaan, dhiigaan kan fir oomaan wal hinbeekneefi wal hin dhaalle Alagaan sirni koloneeffatt uu Habashaa waggaa 130 fi dabare en nurratti waljijjiirtee nugarboom ffa
Kutaa2 ffaa: nugarboomfattee jirti .har'as tooftaa Akaakilee isaanii haaromsatanii giti bittuu Tigiraay Ilmaan wayyaanee mili 5 hin caalle en Oromoon saba guddaan mili 50 tti tilmaamamu garboomfamnee akka jirru waaqaafi lafatu ragaa nuuf ta'aa. Kanaafin jedhee lammi i koo Oromummaan hojiidhaani moo dhiigaafi dhalootaani?yoon dogoggore ta'e naqajeelchaa, yoon sirrii ta'eef immoo najabeessaa!!
Biliisomnee ijaan arguu qabnaa Oromiyaa keenyaa nurra jiraa dargaggoon Oromoo hoodirqamni seenaa amma duunee lafarraa dhumnutti harka keenyaa hin kenninuu diinaaaa hamma qabsoon kun fiixaan ba'uutti bakka jirruu diinaan nifalminaaaaaaa!!!!!!!. Haadarbu ilmaan keenyaaf nuti wareegamnee garbummaa dhaalchifnuu ofii keenyaa baannee.Nutihoo hinloollee dargaggoon Oromoo Alagaatu dhufee nubiliisomsamoo???Walii gallee loolluumaaleeee hinbiliisomnuu har'aa boruulleeeee. waliigallee loolluumaalee garbummaa hinbaanuu har'aa borulleeee. naan ilaaluu jettee har'a irraa dheessituus sigaafataa seenaan boru jalaa baatuuu .Nuun ilaaluu jennee har'a irraa callisnuus nugaafata seenaan boru jalaa baanuuuuuuu.!!!!!!!!!!!.Bilisomnee ijaan arguu qabnaa Oromiyaa keenyaa nurra jiraa dargaggoon Oromoo hoo dirqamni seenaaaa hanga duunee namtokkoo hafuttii qabsoo keenyaan diinaan nifalminaaaaaaa!!!!!!!!!. Gumaa jaallan qabsoo irratti dhuumanii nuutu baasuu qabaaaa beekaa dargaaggoonnii Addunyaarraa hin jiruu biliisummaan tolaaaa Qawweetu nuubaasaaaa waliigalaa lolaaaaa!!!!!!.